Andriamanitra Ray - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Andriamanitra Ray
Andriamanitra Ray no olona voalohany amin’ny maha-Andriamanitra, Ilay tsy niandohany, izay nipoiran’ny Zanaka talohan’ny mandrakizay ary nivoahan’ny Fanahy Masina mandrakizay tamin’ny alalan’ny Zanaka. Ny Ray, izay nahary ny zavatra rehetra hita sy tsy hita tamin’ny alalan’ny Zanaka, dia naniraka ny Zanaka ho famonjena sy manome ny Fanahy Masina ho fanavaozana sy fanekena antsika ho zanak’Andriamanitra. (Johanes 1,1.14, 18; Romana 15,6; Kolosiana 1,15-16; John 3,16; 14,26; 15,26; Romana 8,14-17; Asan’ny Apostoly 17,28).
Olona maro, anisan’izany ny mpino efa ela no maniry porofo fa misy Andriamanitra. Saingy tsy misy porofo avy amin’Andriamanitra hanome fahafaham-po ny rehetra. Tsara kokoa angamba ny miresaka porofo mivaingana fa tsy porofo. Ny porofo dia manome antoka antsika fa misy Andriamanitra ary mifanaraka amin’izay lazain’ny Baiboly momba azy ny maha izy azy. “Tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona” i Paoly, hoy i Paoly tamin’ny Jentilisa tany Lystra (Asan’ny Apostoly 1.4,17). Fijoroana vavolombelona - inona no ao anatiny?
Ao amin’ny Salamo 19,1 steht : Ny lanitra milaza ny voninahitr'Andriamanitra. In Romana 1,20 izany ve [antsoina hoe:
Ny famoronana dia mampiseho famantarana ny filaminana, amin'ny lalàna momba ny vatana. Raha toa ka tsy dia misy firy ny zavatra fototra iainana, raha tsy misy ny tany, dia tsy misy olona. Raha samy manana ny habeny na ny orbit hafa ny tany, ny toe-piainana eto an-tany dia tsy mamela ny ain'ny olona. Ny sasany dia mihevitra an'io ho kisendrasendra fotsiny; ny hafa kosa dia mihevitra kokoa fa hazavaina hoe ny rafi-masoandro dia novolavolain'ny mpamorona marani-tsaina.
Mety sy diso ve izany sa resaka hevitra fotsiny sa fanontanian'ny hevitry ny maro an'isa, sa misy manam-pahefana ambonin'olombelona izay mihevitra ny tsara sy ratsy? Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy manana antony hiantsoana zavatra ratsy ny olombelona, ​​tsy misy antony hanamelohana ny fanavakavaham-pirazanana, ny fandripahan'olona, ​​ny fampijaliana ary ny habibiana mitovy amin'izany. Ny fisian'ny faharatsiana noho izany dia manondro fa misy Andriamanitra. Raha tsy misy izany dia tsy maintsy manjaka ny fahefana madio. Ny antony dia milaza ny finoana an'Andriamanitra.
2. Timoty 1,9 miresaka momba ny zavatra nataon’Andriamanitra “talohan’ny andro”. Nisy fiandohana ny fotoana, ary efa nisy Andriamanitra taloha. Manana fiainana tsy manam-potoana izy izay tsy azo refesina amin'ny taona. Mandrakizay, amin'ny taona tsy manam-petra - ary ny tsy manam-petra miampy miliara maromaro dia mbola tsy manam-petra. Mahatratra ny fetrany ny matematika misy antsika rehefa miresaka momba ny maha-Andriamanitra.
Miverina any ambadiky ny zavatra ny fisian'Andriamanitra ary tsy mihatra aminy ny refy sy ny toetran'ny zavatra. Tsy azo refesina amin'ny kilaometatra sy kilowatts izany. Nanaiky i Solomona fa na dia ny lanitra avo indrindra aza dia tsy mahatakatra an’Andriamanitra (1. Mpanjaka 8,27). Izy no mameno ny lanitra sy ny tany (Jeremia 23,24); eny rehetra eny, eny rehetra eny. Tsy misy toerana ao amin'ny cosmos izay tsy misy azy.
Manao ahoana ny herin'Andriamanitra? Raha afaka mi-trigger ny big bang, mamolavola rafitra solar izay afaka mamorona kaody ADN izy, raha toa ka "mahefa" amin'ireo ambaratongam-pahefana rehetra ireo izy, dia tsy maintsy tena tsy misy fetra ny herisetra ataony, dia tokony ho omnipotent izy. “Satria tsy misy tsy hain’Andriamanitra”, hoy i Lioka 1,37. Afaka manao izay tiany Andriamanitra.
Ao amin'ny famoronan'Andriamanitra dia misy faharanitan-tsaina tsy takatry ny saintsika. Izy no mitondra an’izao rehetra izao ary miantoka ny fitohizan’izany isan-tsegondra (Hebreo 1,3). Midika izany fa tsy maintsy mahafantatra izay mitranga eo amin’izao rehetra izao izy; tsy misy fetra ny faharanitan-tsainy - izy no mahalala ny zava-drehetra. Izay rehetra tiany ho fantatra, fantarina, iainany, fantany, fantaro, iainany.
Satria Andriamanitra no mamaritra ny tsara sy ny ratsy, araka ny famaritana azy dia marina Izy ary manana hery hanao ny tsara mandrakariva. “Fa Andriamanitra tsy azo alaim-panahy hanao ratsy” (Jakoba 1,13). Marina sy marina tanteraka Izy (Salamo 11,7). Ara-drariny ny fari-pitsipiny, marina ny fanapahan-keviny, ary mitsara izao tontolo izao amin’ny fahamarinana izy, satria tsara sy mahitsy izy.
Nisy mpianatra nanontany an’i Jesosy hoe: “Tompo ô, asehoy anay ny Ray...” (Jaona 14,8). Te hahalala hoe manao ahoana Andriamanitra. Fantany ny tantaran’ny roimemy nirehitra, ny andry afo sy ny rahona teo amin’i Sinay, ny seza fiandrianana mahagaga hitan’i Ezekiela, ny firohondrohon’ny ren’i Elia (2. Mosesy 3,4; 13,21; 1 Mpanjaka 19,12; Ezekiela 1). Andriamanitra dia afaka miseho amin’ireo zavatra hita maso rehetra ireo, kanefa manao ahoana marina izy? Ahoana no ahafahantsika maka sary an-tsaina azy?
“Izay mahita Ahy dia mahita ny Ray”, hoy i Jesosy (Jaona 14,9). Raha te hahafantatra an’Andriamanitra isika, dia mila mijery an’i Jesosy. Afaka mahazo fahalalana an’Andriamanitra avy amin’ny zavaboary isika; fahalalana fanampiny momba an’Andriamanitra amin’ny fomba nanehoany ny tenany ao amin’ny Testamenta Taloha; fa ny ankamaroan’ny fahalalana an’Andriamanitra dia avy amin’ny fomba nanehoany ny tenany tao amin’i Jesosy.
Asehon'i Jesosy amintsika ny lafiny manan-danja indrindra amin'ny natioran'Andriamanitra. Izy no Imanoela, izay midika hoe “Andriamanitra momba antsika” (Mat 1,23). Niaina tsy nisy ota izy, tsy nisy fitiavan-tena. Manenika azy ny fangorahana. Mahatsiaro fitiavana sy fifaliana, fahadisoam-panantenana ary fahatezerana izy. Miahy ny tsirairay izy. Miantso ny fahamarinana Izy ary mamela heloka. Nanompo ny hafa izy, na dia hatramin’ny fijaliana sy ny fahafatesana aza.
Toy izany koa Andriamanitra. Efa tamin’i Mosesy no nilazany ny tenany toy izao: “Tompo, Tompo, Andriamanitra mamindra fo sy miantra sy mahari-po ary be famindrampo sy fahamarinana, izay miaro ny fahasoavan’ny olona arivo mandimby sy mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, nefa tsy mamela na iza na iza tsy ho afa-maina ... "(2. 34:6-7).
Ilay Andriamanitra ambonin’ny zavaboary koa dia manana fahalalahana hiasa ao anatin’ny zavaboary. Izany no maha-Imanny Azy, dia ny maha-araka antsika. Na dia lehibe noho izao rehetra izao aza izy ary misy hatraiza hatraiza amin’izao rehetra izao, dia “miaraka amintsika” izy amin’ny fomba tsy “miaraka amin’ny” tsy mino. Ilay Andriamanitra mahery dia akaiky antsika mandrakariva. Izy no akaiky sy lavitra (Jeremia 23,23).
Tamin’ny alalan’i Jesosy no nidirany ny tantaran’ny olombelona, ​​teo amin’ny habakabaka sy ny fotoana. Niasa tamin’ny endriny ara-nofo izy, nasehony antsika izay tokony ho endriky ny fiainana araka ny tokony ho izy, ary asehony amintsika fa tian’Andriamanitra hanandratra ny fiainantsika ho ambonin’ny nofo. Fiainana mandrakizay no atolotra antsika, fiainana mihoatra ny fetra ara-batana izay fantatsika ankehitriny. Atolotra ho antsika ny fiainam-panahy: Ny Fanahin’Andriamanitra no tonga ao anatintsika ka mitoetra ao anatintsika ka mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra (Romana 8,11; 1. Johannes 3,2). Andriamanitra dia momba antsika mandrakariva, miasa amin'ny habakabaka sy ny fotoana mba hanampy antsika.
Andriamanitra dia manana drafitra ho antsika satria Izy no namorona antsika araka ny endriny (1. Mosesy 1,27). Mangataka antsika Izy mba hanahaka azy – amin’ny hatsaram-panahy, fa tsy amin’ny fahefana. Ao amin’i Jesoa no omen’Andriamanitra ohatra izay azontsika sy tokony halain-tahaka: ohatra amin’ny fanetren-tena, fanompoana tsy misy fitiavan-tena, fitiavana sy fangorahana, finoana ary fanantenana.
“Andriamanitra dia fitiavana”, hoy i Johannes (1. Johannes 4,8). Noporofoiny ny fitiavany antsika tamin’ny nanirahany an’i Jesosy ho faty noho ny fahotantsika, mba hirodana ny sakana eo amintsika sy Andriamanitra ary amin’ny farany dia afaka miaina miaraka Aminy ao anatin’ny fifaliana mandrakizay isika. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy fieritreretana fotsiny - fa asa no manampy antsika amin'ny filantsika lalina indrindra.
Ny fitiavan’Andriamanitra antsika, izay aseho mazava indrindra ao amin’i Jesosy Kristy, no modely ho antsika: “Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an’Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika ka naniraka ny Zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha toy izany no nitiavan’Andriamanitra antsika, dia tokony hifankatia koa isika » (1. Johannes 4,10-11). Raha miaina amin’ny fitiavana isika, dia ho fifaliana tsy ho antsika ihany ny fiainana mandrakizay fa ho an’ireo manodidina antsika koa.
Raha manaraka an’i Jesosy eo amin’ny fiainana isika, dia hanaraka azy amin’ny fahafatesana ary avy eo amin’ny fitsanganana amin’ny maty. Ilay Andriamanitra nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty no hanangana antsika koa ka hanome antsika ny fiainana mandrakizay (Romana 8,11). Kanefa: Raha tsy mianatra mitia isika, dia tsy hahazo fiainana mandrakizay koa. Izany no mahatonga an’Andriamanitra hampianarin’Andriamanitra antsika hitia amin’ny fomba izay haharaka antsika, amin’ny alalan’ny ohatra tonga lafatra apetrany eo imasontsika, ka manova ny fontsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina miasa ao anatintsika. Ny hery manjaka amin'ny réactor nokleary amin'ny masoandro dia miasa amim-pitiavana ao am-pontsika, mampirisika antsika, mahazo ny fitiavantsika, mandresy ny tsy fivadihantsika.
Andriamanitra dia manome antsika ny dikany eo amin'ny fiainana, ny fiainana, ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Afaka matoky azy isika na dia tsy maintsy mijaly noho ny fanaovan-tsoa aza. Ao ambadiky ny fahatsaran’Andriamanitra ny heriny; ny fitiavany dia tarihin'ny fahendreny. Ny herin’izao rehetra izao dia eo amin’ny baikony ary ampiasainy hahasoa antsika. Fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia mahasoa ny tsara indrindra amin’izay tia an’Andriamanitra... » (Rom 8,28).